Indlu ethambileyo yelitye kufutshane neGoodwood
Igumbi lakho lokulala e indlu esemaphandleni sinombuki zindwendwe onguChris
Indlu yanamhlanje enomtsalane kwilali yaseMazantsi eDowns enombono wegadi entle.Izixeko eziyimbali zaseChichester kunye neArundel ekufutshane. Ibhaso eliphumeleleyo kunxweme lonxweme lwaseMazantsi uhambo olufutshane, kwaye sibekwe ngokulula kakhulu kwiminyhadala eyaziwayo yeGoodwood Motor ( 0.9 yeemayile). I-pub yethu yelali yemveli ibonelela ngokutya okumnandi kumgama nje ambalwa.
Igumbi elipholileyo kodwa elibanzi kwaye elinomoya elinebhedi ekhululekileyo yenkosi. Ininzi indawo yokuxhoma iimpahla. Izixhobo zokwenza iti kunye nekofu kwigumbi lakho. Igumbi lokuhlambela labucala elinemibono emangalisayo. I-Wi-fi yasimahla iyafumaneka. Akukho TV egumbini. Isidlo sakusasa selizwekazi sibandakanyiwe kunye nokuhlala kwakho.
4.96 · Izimvo eziyi-136
I-cottage ibekwe ngokugqibeleleyo ukutyelela izixeko ezikufutshane zembali zaseChichester naseArundel. Imbasa ephumelele ibhaso elunxwemeni olusemazantsi eWest Wittering kukuhamba nje okufutshane. Lo mhlaba umi kwiPaki yeSizwe eMazantsi eDowns kwaye kukuhamba imizuzu eli-10 kuphela / imizuzu emi-2 ukusuka eGoodwood House ukuya kumnyhadala weGoodwood wesantya kunye nokuvuselelwa kweGoodwood. Kukho ivenkile yelali ( 0.4 yeemayile ) ethengisa amaphephandaba , amashwamshwam kunye nemveliso yokutya okutsha. Ngaphesheya kwendlela ukusuka kwindlwana yindawo yethu yelali yesiqhelo (iimitha ezili-100) ebonelela ngewayini ezimnandi kunye neebhiya kwaye inika ukutya okumnandi okuphekwe ekhaya. Indawo yentselo ikwincam yentsimi yediliya edume kakhulu ( Tinwood ) evulelwa yonke imihla ukungcamla iwayini . Sikwanazo nelizwe elithandekayo elihambahambayo ekuhlaleni kubandakanya ukuhamba okumnandi ukuya kwi-windmill yelali kunye nemibono yayo emangalisayo yepanorama ngaphaya kweDowns kunye nonxweme ukuya kwi-Isle of Wight. Ezinye iindawo zomdla ngaphakathi kwendawo zibandakanya iTheatre yeChichester Festival eyaziwayo (5miles) Goodwood kunye neFontwell Racecourses (zombini iimayile ezi-4). Igalufa eGoodwood Hotel ( 0.9 miles). IWeald kunye neDownland Open Air Museum ( iimayile ezi - 4 ) .Indlu yaseWest Dean enegadi ezimangalisayo kunye nezifundo ezimfutshane zemfundo yabantu abadala ( 4miles ) . I-Polo e-Cowdray Park ( iikhilomitha ezili-12) .Brighton inokufikelelwa ngemoto okanye ngololiwe kwisithuba seyure.
I live near Goodwood and Chichester in the village of Halnaker , a Roman name which means ' Half-naked' and was the term the Romans gave to this area because it served as the stagi…
Ndisebenza ekhaya ukuze ndihlale ndifumaneka ukuze ndincokole neendwendwe kwaye ndincede ngayo nayiphi na indlela endinokuyenza ukuze ukuhlala kwabo kube ntofontofo kwaye konwabe kangangoko. Kwaye uhlala wonwabile ukubonelela ngeengcebiso kwii-pubs kunye neendawo zokutyela kule ndawo kunye nokwenza iingcebiso malunga nezinto ezinomtsalane zasekhaya kunye neziganeko ezinokuba nomdla. Inja yam ' uMicky 'sisikhokelo esigqibeleleyo kunye neqabane ukuba unqwenela ukuphuma kwaye ujonge ezinye zeendlela zethu ezithandekayo zasekhaya ! Ngokufanayo, ukuba ukuhamba ngebhayisikile yindlela yakho yokuthutha, ndinendawo yokugcina ekhuselekileyo ekhoyo .Kukho indawo yokumisa ibhasi ngaphandle kwepropati kunye neebhasi eziqhelekileyo eziya eChichester.
Ndisebenza ekhaya ukuze ndihlale ndifumaneka ukuze ndincokole neendwendwe kwaye ndincede ngayo nayiphi na indlela endinokuyenza ukuze ukuhlala kwabo kube ntofontofo kwaye konwabe k…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Halnaker